Sales Drive | Prestige Myanmar Co, Ltd ﻿
Sales Drive M (1)
17.8.2018, Full time , Construction / Building
- လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးTeam Work ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
- ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
- ဘွဲ့ရရှိပြီး အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၁)နှစ် ရှိရမည်။
- အသက်(၁၈)နှစ် မှ (၃၀)နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
- ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိပြီး အိမ်ထောင်မရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
Work location No.66(A/7), 1 Floor, Yaw Min Gyi Street, Dagon Township, Yangon
Company Industry: Sales Drive
Job posted: 17/8/2018
170 Days, Full time , Construction / Building
•	Customer များ၏မေးမြန်းမှုများကိုတိကျမြန်ဆန်စွာအကြောင်းပြန်နိုင်ရမည်။ •	Search Engine Optimizcrion, Social Media, Email Marketing, Facebook Marketing များကိုသိရှိပြီး လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင် အသုံးချနိုင်ရမည်။
We are looking for Hard working, Passionate , willing to learn & contribute.
Prestige Myanmar is founded byagroup of like-minded people, Together withateam of creative and passionate designers and professional engineers. Beingacustomer oriented company, we believe in the importance of possessing good working attitude and staying committed to our customers. Building trusting relationships work commitment, and quality assurance while working closely to identify and address your individual needs and wants. Our Services included Architecture & Interior Design, construction.
Prestige Myanmar's team members include International and local professional architects, interior designers and construction engineers. We have been involved in many projects in Yangon,other major cities throughout Myanmar, and overseas.
Marketing Executive M/F ( 2)
270 Days, Full time , Construction / Building
•	တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခု ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ •	Interior Decoration နှင့် Construction အတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ •	ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်၍ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရမည်။
Sales & Marketing Executive M/F (5)
- ဘွဲ့ရရှိပြီး အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၁)နှစ် ရှိရမည်။ - အသက်(၁၈)နှစ် မှ (၃၀)နှစ် အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ - ရုပ်ရည်အသင့်ရှိပြီး အိမ်ထောင်မရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
•	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
270 Days, Full time , 500 - 100 Ks, Construction / Building
•	B.E (Civil), B.Tech(Civil), AGTI(Civil) ဖြစ်ရမည်။ •	Word, Excel, Power Point, Internet & Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	Interior Decoration နှင့် Construction အတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။
•	ရိုးသားကြိုးစား၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Senior Architect (Interior & Exterior) Designer
Site Engineer / Site Incharge M ( 2)
375 Days, Full time , 200 - 350 Ks, Construction / Building
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	သွက်လက်ဖြတ်လတ်ပြီးဆိုဒ်တစ်ခုလုံးအားဦးစီးဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Site Engineer(Interior Decoration & Finishing)
427 Days, Full time , Construction / Building
- လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး Team Work ဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Senior Quantity Surveyor F (1)
427 Days, Full time , 500 - 700 Ks, Construction / Building
•	B.E (Civil), B.Tech(Civil), AGTI(Civil) ဖြစ်ရမည်။ •	အသက်(၃၀)နှစ်အထက် ရှိရမည်။
427 Days, Full time , 500 - 1 Ks, Construction / Building
- Interior Decoration အတွေ့အကြုံ(၅)နှစ် ရှိရမည်။ - အသက်(၃၅)နှစ် နှင့် (၄၀)ကြား ဖြစ်ရမည်။ - English (4) Skills တတ်ကျွမ်းရမည်။
427 Days, Full time , 150 000 - 200 000 Ks, Construction / Building
•	အဖွဲ့အစည်းဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားပြီး သွက်သွက်လက်လက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Team Work ဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လေ� ...
Admin/HR Manager (M/F -1 post) M/F (M/F - 1post)
448 Days, Full time , 500 000 - 1 000 000 Ks, Construction / Building
• HR နှင့်ပတ်သက်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား သိရှိအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • ၀န်ထမ်းရေးရာပြဿနာများအား ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်သူ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ • အ� ...
515 Days, Full time , 200 000 - 600 000 Ks, Construction / Building
- လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးTeam Work ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Sales & Marketing M/F (5)
- လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး Team Work ဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
Sales Drive Trading Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Prestige Myanmar Co.,Ltd Trading Jobs Trading Jobs Sales Drive Jobs in Myanmar, jobs in Yangon